Amandla kunye neepilisi zeNgxelo ezizimeleyo
Ubuninzi bobugcisa bezentlanga kubandakanya abantu abazimeleyo ngokukodwa abaqhuba imisebenzi efanayo nababhali beendaba: Abachazela ulwazi (mhlawumbi eyaziwa njengomxholo owenziwe ngumsebenzisi). Le ngcaciso inokuthatha iifom ezininzi, ukusuka kumhleli we-podcast kwingxelo malunga nomhlangano webhunga lebhunga kwiblogi. Ingabandakanya umbhalo, imifanekiso, i-audio, kunye nevidiyo. Kodwa ngokusisiseko konke ngokuthetha ngolwazi oluthile.
Enye into ebalulekileyo yobutyebi bemihlali kukuba ngokuqhelekileyo itholakala kwi-intanethi. Enyanisweni, ukuvela kwe-intanethi - kunye neeblogi , ii- podcast, i-video ye-streaming kunye nezinye izinto ezinxulumene newebhu-yintoni eyenze ukunyatheliswa kolwazi kubemi.
I-intanethi yanikezela ngabemi abangabahlali ukuba bakwazi ukuhambisa ulwazi jikelele. Kwakuyixesha elide ligcinwe kuphela kwiinkampani zoshishino kunye nee-arhente zeendaba.
Ubunonopasho bezentlanga zingathatha iifom ezininzi. I-Steve Outing ye-Poynter.org kunye nabanye baye bachaza iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zokudwendwelwa kwabemi. Ngezantsi inguqu ekhutshweyo ye "Iingqimba" zokuphuma kweendaba zoluntu, zibekwe kwiindidi ezibalulekileyo: ezizimeleyo ezizimeleyo kunye ezizimeleyo ngokupheleleyo.
Uhambo lweeNkcubeko eziManyeneyo
Kubandakanyela abantu abanikelayo, ngenye indlela okanye kwelinye, kwiindawo ezikhoyo zeendaba ezikhoyo. Umzekelo:
Abafundi bathumela izimvo zabo kunye namabhali abhaliweyo ngabanyathelisi beengcali, ngokuyinxalenye yenguqu yekhulu lama-21 yencwadi eya kumhleli. Inamba ekhulayo yewebhusayithi yeendaba ivumela abafundi ukuba bathumele izimvo. Kwimizamo yokukhusela imilayezo engcolileyo okanye engafunekiyo, iiwebhusayithi ezininzi zidinga ukuba abafundi babhalise ukuze bathumele.
Abafundi bongeza ulwazi lwabo kumanqaku abhaliweyo ngabathengi bezentatheli. Ngokomzekelo, intatheli ingenza inqaku malunga nokungafani kwindleko zegesi kwidolophu. Xa ibali livela kwi-intanethi, abafundi bangathumela ulwazi malunga namaxabiso e-gesi kwiindawo ezingakhange zifakwe kwimbali yasekuqaleni baze banikeze iingcebiso malunga nokuthengwa kwegesi engabizi.
Abafundi basebenza ngokubambisana nabaphengululi beengcali ekudibaniseni ibali. Abathathi-mabambi bangase bacele ukuba abafundi abaneengcali kwiindawo ezithile bazithumele ulwazi ngalo mbandela okanye benze ezinye zabo ingxelo. Le ngcaciso ibandakanyeka kwibali lokugqibela.
Iiblogs ze Reader zifakwe kwiiwebhsayithi zeendaba. Oku kungabandakanya iiblogi apho abafundi behlaziya indlela intlangano yeendaba eyenziwa ngayo.
Uhambo loLuntu oluPhezulu
Kubandakanye intatheli yabemi abasebenza ngeendlela ezizimeleyo ngokuzimeleyo kwimizi yamasiko, ezobugcisa. Ezi zinokuthi ibhulogi apho abantu bangabika khona ngeziganeko kwiindawo zabo okanye bazinike izimvo malunga nemiba yosuku. Imizekelo ibandakanya:
Ubomi kufuneka Buqhubeke KuGaza & Sderot
IiWebhsayithi eziqhutywa ngumntu okanye iqela labantu ababika kwiimbali zeendaba kummandla wasekuhlaleni
Ezinye iiwebhusayithi zinabahleli kunye nomxholo wesikrini; abanye abenzi. Abanye banokuba neenguqu zokushicilela. Imizekelo ibandakanya:
KwiiNtaba zeSuku zonke
Utshintsho oluncinane kule mxholo luya kuba ngu-Wikinews, indawo efana ne-Wikipedia, apho umntu angakwazi ukuthumela nokuhlela amabali
Iindawo ze-hybrid apho abapheli beengcali kunye nabahlali basebenza kunye
Uphi Uhambo Lwezemihlali Emazweni Ema ngoku?
I-journalism yenkcubeko yayisetyenziswe njengenguqulelo eyayiza kubakho ukuqokelela iindaba ngeenkqubo zentando yesininzi - enye eyayingayi kuba yiphondo leentatheli zengcali. Nangona abathathi-ndaba beendaba bexhobisa uluntu lwasekuhlaleni kwaye bazalise izikhalazo zeendaba eziphathekayo, uhlala umsebenzi. Enye ingxaki kukuba ukunyatheliswa kwabemi beendaba kubonakaliswe yi-non-fact-checked, ingxelo engachanekanga, njengeengxelo zezopolitiko ezahlula ngakumbi amaMerika kwinkcubeko yezobupolitika yanamhlanje. Ngeengxelo ezingalungile, abaphulaphuli bashiywe bengayazi ukuba ngubani okanye into enokuyikholelwa.
Ingakanani Imali Ngaba iProferfer Pro Yenza?
Imithetho yeKorinte kunye neMbali
Iingqungquthela zoBumbano: 'Uxolo Simele, Sihlukane Siwa'
Imfazwe Yehlabathi II: USS Maryland (BB-46)
Yintoni Ingcaciso yesiLwimi seModal ngesiNgesi?
I-Top 40 yokuQiniswa kweeNgoma Zonke ixesha
Ezili-10 zezona ziNinzi eziKhuseleko zeGalofu
INtaba iFiji: Intaba Eyaziwa kakhulu eJapan
Ziziphi Iimvavanyo Zempumelelo?